Baiboly pejy 708 - Ny Baiboly
Voalohany < 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Fanambaràna toko 12 (tohiny)
6Fa Ravehivavy kosa nandositra nankany an'efitra, fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy, mba hamelomana azy mandritra ny enim-polo amby roan-jato sy arivo andro.
7Ary nisy ady tany an-danitra: Misely sy ny anjeliny moa niady tamin'ny Dragona; ny Dragona sy ny anjeliny koa namely, 8fa tsy nahomby, sady tsy nahazo nitoetra tany an-danitra intsony; 9ka nazera ity Dragona lehibe, dia ilay menarana antitra atao hoe demony sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; ny tenany moa nazera tamin'ny tany, ny anjeliny koa nazera niaraka aminy. 10Dia nandre feo mahery tany an-danitra aho, nanao hoe: Ankehitriny dia an'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana; an'ny Kristiny koa ny fahefana; fa efa voazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampanga azy andro aman'alina eo anatrehan'Andriamanitsika. 11Nandresy azy ireo koa ny rahalahintsika noho ny ran'ny Zanak'ondry sy ny teny nambarany ary ny tsy fitandroany ny ainy na dia ho faty aza izy. 12Koa mifalia, ry lanitra, mbaminareo monina ao aminy. Fa loza ho anareo kosa, ry tany aman-dranomasina, fa navarina any aminareo ny demony, misafoaky ny hatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny.
13Nony hitan'ilay Dragona fa voazera amin'ny tany izy, dia ilay Vehivavy tera-dahy no nenjehiny. 14Nomena ela-boromahery lehibe roa anefa Ravehivavy, mba hanidinany ho any an'efitra amin'ny fitoerany, izay namelomana azy fotoana iray, sy fotoana roa, ary antsasaky ny fotoana, mba tsy hahitan'ilay menarana azy. 15Dia nandefa rano toy ny ony avy amin'ny vavany ilay menarana, hankany amin-dRavehivavy, mba hipaohan'ny ony azy. 16Kanjo novonjen'ny tany kosa Ravehivavy, fa nivava ny tany, dia nitelina ny ony nalefan'ilay Dragona tamin'ny vavany. 17Tezitra tamin-dRavehivavy ny Dragona, ka ary amin'ny zanany sisa mitandrina ny didin'Andriamanitra sy maharitra amin'ny fanambaran'i Jesoa no nifotrohany niadiana; 18dia teny amin'ny fasi-dranomasina izy no nitsatoka.
Fanambaràna toko 13
Ny famantarana faharoa - Ilay Biby avy amin'ny ranomasina - Ny famantarana fahatelo - Ilay Biby avy amin'ny tany.
1Rahefa izany, dia nahita Biby anankiray niakatra avy amin'ny ranomasina aho; fito ny lohany, folo ny tandrony, satro-boninahitra folo no teny an-tandrony, ary anarana fanevatevana an'Andriamanitra no tamin'ny lohany.
2Sahala amin'ny leoparda ilay Biby hitako; toy ny tongotr'orsa ny tongony, tahaka ny vavan-diona ny vavany. Nomen'ilay Dragona azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. 3Toa voan'ny ratra mahafaty ny lohany iray, nefa sitrana ihany ilay fery saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra, ka sady nanaraka azy 4no nitsaoka ny Dragona izay nanome fahefana ny Biby, sy nitsaoka ny Biby koa, nanao hoe: Iza moa no tahaka ny Biby, ary iza no mahady aminy? 5Ary nomena vava mitsaontsaona sy manevateva an'Andriamanitra izy, sady nomena fahefana hanaram-po roa amby efa-polo volana. 6Dia nanokatra ny vavany izy, ka nanevateva an'Andriamanitra sy nanevateva ny anarany mbamin'ny tranolainy, sy ireo monina any an-danitra. 7Nomena fahefana hiady amin'ny olo-masina sy handresy ireo koa izy; ary nomena fahefana tamin'ny foko rehetra, sy ny fanjakana mbamin'ny samihafa fiteny sy ny firenena rehetra. 8Dia hitsaoka azy ny mponina eto an-tany rehetra, izay tsy mba voasoratra anarana teo amin'ny bokin'ny fiainan'ny Zanak'ondry, ilay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao.
9Izay manan-tsofina aoka hihaino. 10Izay tokony ho amin'ny fahababoana, dia mankany amin'ny fahababoana; izay mamono amin'ny sabatra tsy maintsy hovonoina amin'ny sabatra. Toy izany no fandeferana sy finoan'ny olo-masina.
11Dia nahita Biby anankiray hafa koa aho, niakatra avy amin'ny tany; roa toy ny an'ny zanak'ondry ny tandrony, ary niteny toy ny dragona izy. 12Nampiasainy avokoa ny fahefan'ilay Biby voalohany eo anatrehany, ary nampivavahiny tamin'ilay Biby voalohany, sitrana tamin'ny fery saiky nahafaty azy, ny tany mbamin ízay monina ao aminy. 13Nanao fahagagana lehibe teo imason'ny olona izy hatramin'ny nampidinana afo avy any an-danitra ho ety an-tany aza; 14ary namitaka ny mponina amin'ny tany tamin'ny fahagagana nomena hataony teo anatrehan'ny Biby, nasainy nanao sarin'ilay Biby naratry ny sabatra nefa velona ihany ny mponina eto an-tany; 15sady navela hanisy aina ny sarin'ny Biby izy, sy hampiteny azy, ary hampamono izay rehetra tsy mivavaka amin'ny sarin'ny Biby. 16Ny olona rehetra, na kely na lehibe, na mpanan-karena na mahantra, na olom-potsy na andevo, dia nasainy nasiana marika tamin'ny tànany an-kavanana na tamin'ny handriny avokoa; 17mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay voaisy mariky ny anaran'ny Biby, na ny isan'ny anarany.
18Eto no ilàna fahendrena! Ka aoka izay manan-tsaina hamantatra ny isan'ny Biby, fa isa milaza olona izany, ary enina amby enim-polo sy enin-jato izany isa izany.
17Nisy anjely anankiray hafa koa, nivoaka avy teo amin'ny tempoly any an-danitra, nitana antsy fijinjàna maranitra koa. 18Dia nivoaka avy eo amin'ny otely ity anjely manam-pahefana amin'ny afo, niantso tamin'ny feo mahery, ka nilaza tamin'ilay nitana antsy fijinjàna maranitra hoe: Alefaso ny antsy fijinjànao, ka otoazy ny sampahom-boaloboka eny amin'ny tanim-boaloboky ny tany, fa efa masaka ny voany. 19Dia nalefan'ilay anjely tany amin'ny tany ny antsy fijinjàny, ka notoazany ny voaloboky ny tany, ary natsipiny tao anatin'ny famiazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra izany.
Pejy: Voalohany < 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3007 seconds